Nhau - Kushandiswa kwePVC
PVC ndiyo yekutanga-yechinangwa thermoplastic uye ine akasiyana maficha. Parizvino ndiyo yechipiri yakakura mhando yepurasitiki chigadzirwa chechipiri chete kune yakaderera-density polyethylene.
Zvigadzirwa zvinogona kukamurwa muzvigadzirwa zvakaoma uye zvakapfava zvigadzirwa:
Iko kushandiswa kukuru kwezvigadzirwa zvakaoma ipombi uye zvekuisa, uye kumwe kushandiswa kukuru kuri pamadziro emadziro, zvikamu, madhoo nemahwindo, zvekutakura zvinhu, nezvimwe.
Zvigadzirwa zvakapfava zvinonyanya kushandiswa kumafirimu, machira, mawaya netambo, zvigadzirwa zvepasi, chakagadzirwa nedehwe, nezvimwe.
Chii chinonzi PVC chinoshandiswa?
Iyo misiyano yezvishandiso zvePVC inopokana iyo fungidziro. Muhupenyu hwezuva nezuva, ivo vakatikomberedza: maumbirwo ekuvaka, zvishandiso zvekurapa, matenga edenga, makadhi echikwereti, matoyi evana, uye pombi dzemvura uye gasi. Zvishoma zvimwe zvinhu zvinoita senge zvinokwenenzverwa kana kugona kuzadzikisa kudomwa kwakadai. Nenzira iyi, PVC inokurudzira kugona uye hunyanzvi, ichiita kuti mikana mitsva iwanikwe mazuva ese.
Nei uchishandisa PVC?
Zvakare nekuti zvigadzirwa zvePVV zvinoita kuti hupenyu huve hwakachengeteka, hunounza nyaradzo uye mufaro, uye zvinobatsira kuchengetedza zviwanikwa uye kurwisa shanduko yemamiriro ekunze. Uye, nekuda kweye yakanakisa mutengo-kuita chiyero, PVC inobvumidza vanhu veese mapato mari kuwana kune zvigadzirwa zvayo.
PVC inobatsira sei kune nyika yakachengeteka?
Kune zvikonzero zvakawanda nei PVC uye chengetedzo zvakabatana. Nekuda kweasinga pfuurirwe hunyanzvi hunyanzvi, PVC ndicho chinonyanya kushandiswa zvinhu zvekuchengetedza-hupenyu uye zvinokanganisa zvigadzirwa zvekurapa. Semuenzaniso, PVC yekurapa tubing haina kink kana kutyora, uye zviri nyore kutapisa. Nekuda kwePV yekudzivirira moto, tambo netambo dzakaputirwa nePV zvinodzivirira njodzi dzinogona kuuraya magetsi. Uyezve, PVC chinhu chakasimba. Ichishandiswa muzvinhu zvemotokari, PVC inobatsira kudzikisa njodzi yekukuvara kana paitika tsaona.